Sat, Aug 8, 2020 at 12:10pm
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन : डोनाल्ड ट्रम्प भर्सेस बाइडेन #आहा खबर# तीन महिना भित्र रेशम चौधरीलाई रिहाई नगरे थरुहट क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीकाे प्रवेश निशेष निशेध #आहा खबर# प्रधानमन्त्रीद्वारा अयोध्यापुरीकाे थप अध्ययन र संरक्षणमा जुट्न आग्रह #आहा खबर# बंगलादेश फुटबल टिमका खेलाडी र प्रशिक्षक गरी १८ जनामा कोरोना संक्रमण #आहा खबर# उपत्यकाका १३६ ठाउँमा फैलियो कोरोनाकाे संक्रमण #आहा खबर# रुपन्देहीमा कार दुर्घटनामा परी ३ जनाको मृत्यु #आहा खबर# देशभर तीन दिन लगातार वर्षाकाे सम्भावना #आहा खबर# एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु, १४० बढी घाइते #आहा खबर# भारतमा दुई दिनमै थपिए १ लाख २० हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित #आहा खबर# रियल मड्रिडलाई पराजित गर्दै म्यान्सेष्टर सिटी च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइलनमा #आहा खबर# लोक गायक प्रेमराजा महत दम्पतीमा देखियाे कोरोनाकाे संक्रमण #आहा खबर# कोरोनाकाे संक्रमण बढेपछि हवाई उडान तथा लामो दूरीको यातायात सञ्चालनमा अन्योल #आहा खबर# काेराेना नियन्त्रणका लागि सरकारकाे तयारी पर्याप्त रहेकाे ईश्वर पोखरेलकाे दावी #आहा खबर# महामारी रोकथामका कदम प्रभावकारीः राष्ट्रपति #आहा खबर# नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएका पुरुषमा कोरोना पुष्टि #आहा खबर#
एजेन्सी । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिएसँगै विजेताको आँकलन गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडनले चुनौती दिँदैछन्। बाइडन पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाको कार्यकालमा उपराष्ट्रपति भएका थिए। बाइडन अमेरिकी राजनीतिमा १९७० देखि सक्रिय रहेका छन्। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सर्वेक्षण गर्ने संस्थाहरु आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको पक्षमा जनमत देखाउने कोसिसमा लागिसकेका छन्। जनताको मुड चेन्ज..
एयर इन्डिया एक्सप्रेसको विमान दुर्घटना १९१ यात्रु बोकेको
यर इन्डिया एक्सप्रेसको बोइङ-७३७ शुक्रबार साँझ केरलको कोजिकोडमा दुर्घटना भएको छ। विमानमा चालक दलका सदस्यसहित १९१ जना यात्रु रहेको बिबिसीले जनाएको छ। भारतीय अनलाइन स्क्रोलका अनुसार दुर्घटनामा जहाजका एक पाइलटसहित कम्तिमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। विमान दुबईबाट आइरहेको थियो। नेपाली समयअनुसार साँझ करिब ७ बजेर ४५ मिनेट जाँदा कोजिकोड एयरपोर्टमा अवतरण क्रममा रनवेबाट चिप्लिएर विमान दुर्घटना भएको हो। विमान अवतरण क्रममा..
चीनले कस्मिरको मुद्दा राष्ट्रसंघमा उठाउने भएपछि भारत बन्याे आक्रोशित
एजेन्सी, २२ साउन । चीनले कस्मिरको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा छलफलका लागि उठाउने प्रयत्न गरेको भन्दै भारत चीनसँग भड्किएको छ। चीनले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यस्ता कार्य नगर्न बिहीबार भारतले चेतावनी दिएको छ। कस्मिरको मामिलामा बाहिरी हस्तक्षेप अस्वीकार गरिने भारतले जनाएको छ। ‘चीनले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भारतीय भूभाग जम्मु र कस्मिरबारे छलफल सुरु गरेको जानकारी पाएका छौं।’ भारतको विदेश..
विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको निःशुल्क उद्धार प्रक्रिया सुरु
काठमाडाैं, २२ साउन। सरकारले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा समस्यामा परेका र घर फर्कन टिकट काट्न नसक्ने नेपालीको निःशुल्क उद्धार प्रक्रिया थालेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले निःशुल्क उद्धार निर्देशिका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएर अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारका वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको ७५ करोड रुपियाँ रकम छुट्याइएको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी दीनवन्धु सुवेदीले निर्देशिकाअनुसार बजेट छुट्याइएको र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत..
काठमाडौं, २१ साउन। लेबनानको राजधानी बेरुतमा विष्फोटक पदार्थ राखिएको गोदाम घरमा ठूलो विष्फोट भएको छ । लेबनानका स्वास्थ्यमन्त्रीले विष्फोटबाट कम्तिमा ७० जनाको मृत्यु भएको र करिब चार हजार जना घाइते भएको बताएका छन् । यो घटनापछि लेबनानका प्रधानमन्त्री हसन दिआबले बुधबार राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेका छन् । घटनालाई भयावह भन्दै उनले दोषी जो भए पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन् । गोदाममा विष्फोटक पदार्थ..
पाकिस्तानले पनि जारी गर्‍यो जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई समेटेर नयाँ नक्सा
काठमाडाैं, २१ साउन । पाकिस्तानको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ राजनीतिक नक्सालाई स्वीकृति दिएको छ । पाकिस्तानको नयाँ राजनीतिक नक्सामा जम्मू कश्मीर-लद्दाख-जूनागढलाई पाकिस्तानी क्षेत्रमा देखाइएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले मंगलबार यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई विपक्षी पार्टी र कश्मीरी नेतृत्वले स्वागत गरेको समेत बताए। पाकिस्तानको नयाँ राजनीतिक नक्साले पाकिस्तानी जनताहरूको उमंगको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउँदै उनले भने, 'पाकिस्तान र कश्मीरीहरूले सैद्धान्तिक..
नयाँ दिल्ली, २० साउन । भारतमा ‘कोभिड १९’ सङ्क्रमितको सङ्ख्या १८ लाख नाघेको छ । गत २४ घण्टामा भारतका ५२ हजार ९७२ जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या १८ लाख ३ हजार ६९६ पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार जानकारी दिएको छ । भारतमा गत २४ घण्टामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण ७७१ जनाको मृत्यु भएपछि कूल मृतकको सङ्ख्या ३८ हजार १३५..
नयाँ दिल्ली, १९ साउन । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का लागि आइतबार ‘कालो दिन’ साबित भएको छ। यसको सुरुवात बिहान साढे ९ बजे भयो। जतिबेला उत्तर प्रदेशकी शिक्षामन्त्री कमल रानी वरुणको निधन भयो। कोरोना संक्रमणभएपछि उपचारका लागि उनलाई गत जुलाई १८ तारिख एसजीपीजीआईमा भर्ना गरिएको थियो। तर उनलाई बचाउन सकिएन। त्यही दिन अपराह्न पौने ५ बजे भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले आफूलाई..
संकटकाल घोषणा अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा
अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा संकटकाल घोषणा गरिएको छ । साथै लकडाउनको नयाँ नियम लागू गरिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण बढेसँगै अष्ट्रेलियाको उक्त राज्यमा संकटकाल घोषणा गरिएको हो । भिक्टोरियाका प्रिमियर ड्यानिअल एन्ड्रयुजले आइतबार साँझको ६ बजेदेखि संकटकाल लागू हुने बताएका छन् ।यसअघि व्यवस्था गरिएअनुसारको घरबाट बाहिर जान पाउनुपर्ने प्रयोजनहरु घटाइएको छ । नयाँ नियमपछि भिक्टोरियाको राजधानी मेलबर्नमा रातको समयमा कफ्र्यु..
विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा ८० जनाभन्दा बढीको मृत्यु
नयाँदिल्ली। भारतको पञ्जाब राज्यमा पछिल्लो समय विषाक्त मदिरा सेवन गर्ने ८० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेहरुमा पञ्जाब प्रान्तका उत्तरी क्षेत्रका तीन जिल्लाका व्यक्तिहरु रहेका छन्। प्रहरीले अबैध मदिरा बेचबिखन गरेको आरोपमा २५ जनालाई पक्राउ गरेको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा हरेक वर्ष विषाक्त मदिरा सेवनबाट सयौं व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ। अबैध यस्तो मदिरा स्थानीय बजारमा प्रति..
काठमाडौं। भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। गृहमन्त्री शाहले आफै यसबारे पुष्टी गरेका छन्। आइतबार दिउँसो उनले आफ्नो ट्वीटर अकाउन्टमा आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘कोरोनाका सुरूआती लक्षण देखिएपछि मैले परीक्षण गराएको थिएँ र रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ’, ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘मेरो स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ तर डाक्टरहरूको सल्लाहमा अस्पताल भर्ना भएको छु।’ उनले आफूसँग..
एक महिनामै लिए पाँच हजारले श्रम स्वीकृति
काठमाडौँ,१७ साउन। वैदेशिक रोजगारीबाट बिदामा आएर जान नपाएका पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा झन्डै पाँच हजारले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत फागुन ३० गतेदेखि बन्द रहेको वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको असार १८ गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया सुरु भएयता चार हजार ८५० जनाले पुनः श्रम स्वीकृति दिएका हुन्। कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई..
अफगान राष्ट्रपति अस्रफ घानीले शुक्रबार पाँच सय तालिबानीलाई जेलमुक्त गर्न आदेश दिनु भएको छ । ईदका अवसरमा तीन दिने नयाँ युद्धबिराम शुरु भएसँगै राष्ट्रपतिले यस्तो आदेश दिनु भएको हो । संयुक्तराज्य अमेरिकासँग गत फेब्रुअरीमा तालिबान समूहले गरेको सम्झौतामा उल्लेखित सबै पाँच हजार तालिवानी पछिल्लो पटक गरिएको रिहाईसँगै मुक्त भएका राष्ट्रपति घानीले जानकारी दिनुभयो । ईदका अवसरमा दिनुभएको मन्तव्यमा राष्ट्रपति घानीले भन्नुभयो,..
काठमाण्डौ, १६ साउन। कुवेतले नेपालसहित विभिन्न ७ देशका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । कुवेतको हिजोको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालसँगै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, इरान र फिलिपिन्सबाट जाने नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको हो । कवेतले अगष्ट १ देखि व्यवसायिक उडानहरु खोल्दैछ । तर उडान खुले पनि नेपालसहित सात देशका नागरिकले भने कुवेत प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । कुवेत खाडीको सानो देश भए पनि त्यहाँ..
टिकट काट्न नसकेर ओमानबाट घर फर्कन पाउनुभएको छैन ? यसाे गर्नुहाेस्
काठमाण्डौ, १६ साउन। ओमानमा समस्यामा पर्नुभएको छ तर टिकट काट्ने पैसा नभएर घर फर्कन पाउनुभएको छैन ? यदि यस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ भने अब निःशुल्क घर फर्कन फारम भरेर ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासमा बुझाउनुहोस् । कोरोनाको कारण बेरोजगार भएका तथा कम्पनीले कुनै पनि सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा भएका र आफैं टिकट किनेर घर फर्कन नसक्ने नेपालीले दूतावासले तोकेको ढाँचा अनुसार फारम भरेर बुझाउन..
अमेरिकामा काेराेनाबाट १ लाख ५० हजारभन्दा बढीको मृत्यु
काठमाडौं, १५ साउन। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अमेरिकामा एक लाख ५० हजारभन्दा धेरै जनाको मृत्यु भएको छ । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ५० हजार ४ सय ४७ छ । यसैगरी ४४ लाख १४ हजार ८ सय ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । अमेरिकाका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले कोरोना संक्रमण तीव्र..
हङकङमा पुन: काेराेना संक्रमण फैलिएपछि अहिलेसम्मकै कडा प्रतिबन्ध
काठमाडाैं, १४ साउन । कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि तीव्र रूपमा बढेपछि हङकङमा अहिलेसम्मकै कडा नियम लागू गरिएको छ। बुधबारदेखि त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा खाना खान प्रतिबन्ध, फरक घरका दुई जनाभन्दा बढी भेट्न नपाइने तथा सार्वजनिक स्थानमा मास्क लगाउनैपर्ने नियम लागू गरिएको हो। यसअघि कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको हङकङमा अहिले लगातार दैनिक सयभन्दा बढी नयाँ संक्रमित फेला परिरहेका छन्। यसैकारण हङकङमा..
ट्रम्पका छोरामाथि ट्वीटरले लगायाे प्रतिबन्ध
एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका जेठो छोरामाथि ट्वीटरले १२ घण्टे प्रतिबन्ध लगाएको छ ।ट्रम्पका जेठो छोरा डोनल्ड ट्रम्प जुनियरले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनको फाइदाबारे जानकारी दिँदै ट्वीटरमा एउटा भिडियो पोस्ट गरेपछि उनीमाथि १२ घण्टासम्म कुनै ट्वीट गर्न नमिल्ने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो । ट्वीटरका अनुसार ट्रम्प जुनियरले पोष्ट गरेको उक्त भिडियोले कोभिड–१९ बारे गलत सूचना सम्प्रेषण गर्छ । यो ट्वीटरको नियमको उल्लंघन हो । ट्वीटरले..
नैतिकता उल्लंघन गरेको आरोपमा इजिप्टमा टिकटकका ५ जना प्रभावशाली महिला पक्राउ
काठमाडाैं, १३ साउन । इजिप्टको एक अदालतले पाँच सामाजिक सञ्जालका पाँच जना प्रभावशाली महिलाहरुलाई सार्वजनिक नैतिकता उल्लंघन गरेको आरोपमा २ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । भिडियो सेयरिङ एप टिकटकमा पोष्ट गरिएको भिडियोका आधारमा हनिन होसाम, मोवाडा अल–अद्दामसहित अन्य तीन जनालाई सो सजय सुनाइएको हो। अलजजिराका अनुसार उनीहरुलाई १८ हजार ७५० डलर जरिवाना पनि सुनाइएको छ । यो निर्णयविरुद्ध अपिल भने..
ब्राजिलका राष्ट्रपति बोलसोनारो कोरोना संक्रमणमुक्त
ब्राजिल, ११ साउन । ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोलसोनारोले कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । पछिल्लो परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै उनी संक्रमणमुक्त भएका हुन् । उनले ट्वीट गर्दै आफ्नो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताएका हुन्। यसअघि उनमा दुई पटकसम्म कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो। बोलसोनारोले कोरोना भाइरसलाई सामान्य फ्लू भन्दै आएका छन्। विश्वमा अमेरिकापछि ब्राजिलमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित छन्। ब्राजिलमा हालसम्म २३ लाखभन्दा बढी..
भारतको मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री चौहानलाई काेराेना संक्रमण
नयाँ दिल्ली : भारतको मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले आफूलाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको खुलासा गरेका छन्। शनिवार ट्विटमार्फत् मुख्यमन्त्री चौहानले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। 'मेरा प्यारा नागरिकहरु, मलाई कोभिड १९ को संकेतहरु देखिएको थियो। परीक्षण गर्दा पोजेटिभ रिपोर्ट आयो,' चौहानले ट्विटमा लेखेका छन्, 'मसँग सम्पर्कमा आउनु भएका सबै सहकर्मी, तथा अन्य जोसुकै हुनु भए पनि कोरोना परीक्षण गर्न जानुहोला। मेरो नजिक..
अमेरिकामा औषधिको मूल्य घट्ने, ट्रम्पद्वारा मूल्य घटाउने आदेशमा हस्ताक्षर
काठमाडौं, १० साउन । अमेरिकामा औषधिको मूल्य घट्ने भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका चार आदेशमा औषधिको मूल्य घटाउने आदेश पनि समावेश छ। यो आदेशसँगै अमेरिकामा अब डाक्टरले प्रेस्काइभ गरेको औषधि किन्न अमेरिकीहरुले कम पैसा खर्च गर्नेछन् । ‘शीर्ष औषधि कम्पनीहरुका अधिकारीहरुले बैठकको लागि अनुरोध गरेका छन्’, ट्रम्पले भने,’बैठकमा यसबारे चर्चा हुन सक्छ, उनीहरुले कसरी औषधिको मूल्य कम गर्न..
काेराेना अपडेट: विश्वभर कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या डेढ करोड नाघ्यो
काठमाडाैं, ७ साउन। विश्वभर कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या एक करोड ५० लाख ८४ हजार ३७१ पुगेको छ। ६ साउनमा एकैदिन दुई लाख ३८ हजारभन्दा बढी संक्रमित फेला परेका छन्। जुलाई शुरुदेखि नै दैनिक संक्रमितको संख्या दुई लाख नाघेको थियो। सबैभन्दा बढी संक्रमित १६ जुलाईमा करीब दुई लाख ५० हजार भेटिएका थिए। त्यस यता हरेक दिन नयाँ संक्रमित भेटिने दर केही कम भए पनि..
नेपालसहित १६ देशको भ्रमण नगर्न जापानद्वारा आफ्ना नागरिकलाई निर्देशन
काठमाडौं, ६ साउन । जापानले आफ्ना नागरिकलाई नेपाललगायत १६ देशको भ्रमण नगर्न निर्देशन (ट्राभल एड्भाइजरी) जारी गरेको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दो रूपमा रहेको जनाउँदै जापानले नेपालगायत १६ देशको भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई भनेको हो । जापानले यात्रा नगर्न निर्देशन दिएका देशमा नेपाल, प्यालेस्टाइन, केन्या, भेनेजुयला, बोत्स्वाना, कोमोरोस, लाइबेरिया, लिबिया, मादागास्कर, नामिबिया, पराग्वे, कंगो, सिरिया लियोन, सुडान, सुरिनेम र उज्वेकिस्तान..
चीनमा चौबीस घण्टामा भेटिए ११ जना नयाँ कोरोना संक्रमित
बेइजिङ, ६ साउन । चीनमा गएको चौबीस घण्टामा कोरोना भाइरसका ११ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । यसको अघिल्लो दिनमा भने चीनमा २२ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए । चीनको स्वास्थ्य आयोगका अनुसार यी ११ संक्रमितमध्ये ८ जना सिन्जियाङ प्रान्तका हुन् । बाँकी तीन संक्रमित बाहिरी मुलुकबाट चीन आएकाहरु रहेको पनि स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ । कोरोना संक्रमणको सुरुवात चीनबाटै सुरु..
ब्राजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ८० हजार नाघ्याे
काठमाडौं, ६ साउन । ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले ब्राजिलमा मृत्यु हुनेको संख्या ८० हजार नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ७१८ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै ब्राजिलमा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या ८० हजार २५१ पुगेको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा २१ हजार ७४९ जना संक्रमित भएसँगै मंगलबार बिहानसम्म ब्राजिलमा कोरोनाले संक्रमित हुनेको संख्या २१ लाख..
सैन्य हेलिकप्टर समुद्रमा खस्दा दुई जनाको मृत्यु
नेदरल्याण्ड्स । नेदरल्याण्ड्सको सैन्य हेलिकप्टर समुद्रमा खस्दा दुई जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ । यहाँको रक्षा मन्त्रालयले आइतबार अपराह्न यस्तो दुर्घटना भएको जानकारी दिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार यस दुर्घटनालाई रहस्यमयी घटनाको रुपमा लिइएको छ । दुर्घटनाको कारण अझै खुलेको छैन । यद्यपि सरकारले घटनाको छानविन गर्ने जनाएको छ। क्यारेबियनको आरुबाबाट कुराकाओका लागि उडेको हेलिकप्टर उड्नासाथ दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । हेलिकप्टरमा भएका..
नागरिकलाई मास्क प्रयोगका लागि अपिल गर्न डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा अस्वीकार
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आम नागरिकलाई मास्क प्रयोगका लागि अपिल गर्न अस्वीकार गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी थप तीव्र गतिमा फैलिरहेका बेला आफूले एकपटक सार्वजनिक रुपमा गएको हप्ताको शनिबार मास्क लगाएका ट्रम्पले सर्वसाधारणलाई अपिल गर्न भने अस्वीकार गरेका हुन् । मास्क प्रयोग गरेमा संक्रमणबाट जोगिने र संक्रमण भएको भए अरुलाई सार्नबाट बच्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अमेरिकाका वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ..
काठमाडौं। पोल्याण्डमा राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचनको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै विपक्षीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रमुख विपक्षी गठबन्धन सिभिक कोलिसन र निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार राफल त्रजास्कोवस्कीको तर्फबाट विरोध प्रदर्शनसहित सर्वोच्च अदालतमा उजुरी समेत दायर गरिएको छ। उजुरीमा बर्तमान राष्ट्रपति समेत रहेका र अहिलेको निर्वाचनबाट फेरी निर्वाचित भएको घोषणा गरिएका अन्ड्रजेज डुडाको पक्षमा धाँधली गरिएको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरुले अहिलेको नतिजालाई अस्विकार..
न्यूयोर्क। संयुक्तराज्य अमेरिकाले कोरोनाभाइरसका कारण अनलाइन कक्षा लिइरहेका विदेशी विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिएको छ। हार्वर्ड र एमआईटी विश्वविद्यालयहरुले अमेरिकी सरकारको निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार विभागले जुलाई ६ मा सूचना जारी गरेको थियो। अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको आदेशमा जारी भएको सूचना विरुद्ध विश्वविद्यालयका साथै विभिन्न संघसंस्था, शिक्षक युनियन र..
Results 1651: You are at page 1 of 56